Tatami Jabbaan: farshaxanka seexashada dhulka | Safarka Absolut
Lugaha Alberto | | Japan
Haddii uu jiro waddan ay ka buuxaan caadooyin gaar ah, waa Jabbaan, waa waddan bari oo laftiisa mararka qaar u eg meeraheenna. Jasiirad saameyn ku leh dhaqammadii iyo dhaqammadii hore ee laga helay tatami-ga Jabbaan, ama sariirta dhiirrigelisa farshaxanka seexashada dabaqa, mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan dhammaan. Ma rabtaa inaad si fiican u ogaato waxa ay ka kooban tahay?
Tatami Jabbaan: waa cunsur lama huraan u ah dhaqanka Jabbaan
Markii aan aragno guri caadi ah oo Jabaan ah oo aan ka helno sariiro halkii sariiro, dad badan oo reer galbeed ah ayaa la yaabay sida iyo sababta ay Jabaanku ugu adeegsadaan cunsur sida tatami ah. Si kastaba ha noqotee, sida caadooyinka Japan oo dhan, midkani wuxuu leeyahay sharraxaad. Ama dhowr.
Tatami-ka Jabbaan waa derin sida caadiga ah laga sameeyay caws iyo midab cagaar ahIn kasta oo meelaha qaarkood ay ka buuxsameen bariis haddana xilligan sidoo kale lagu sameeyay polystyrene ballaadhiyay, in kasta oo aanu ahayn kan ugu caansan, aadna uga yar Japan. Kuwani, markooda, waxaa lagu daboolay busteyaal xiiso leh oo laga sameeyay cawsduur magaceeduna yahay sida.
Faa'iidooyinka tatami-ga Jabbaan iyo qaab-dhismeedkiisu waa kuwan soo socda:
- Waa insulator acoustic, maaddaama cawsku u oggolaanayo nuugista codka, aamusnaanta ku tiirsanaanta iyo fududeynta hurdada.
- Waa kuleyliyaha kuleylka, tan iyo markii ay u oggolaaneyso dadka in laga go'doomiyo qabowga dhulka.
- Wuxuu nuugaa qoyaanku wuxuuna hagaajiyaa bay'ada, sidaas darteed waxaa jira xilliga cusub xagaaga iyo kuleylka xilliga qaboobaha.
Qarniyo ka hor, qoysaska ugu taajirsan Tokyo waxay u adeegsan jireen inay ku daboolaan dhulka, inkasta oo markii dambe ay bilaabatay in la dhigo guryaha shaaha, iyada oo ah cunsur ku xiran xafladaha lagu qabto guryahaas. Markii la gaadhay qarnigii XNUMXaad, inta badan dadka reer Japan waxay horeba u qaateen kaalmadan guryahooda.
Haddii qof isweydiiyo hadday ahaan lahayd tamaatiga ama guriga ka hor, waxay noqon lahayd kii ugu horreeyay, maaddaama qaabeynta iyo tirada tatami ee guryaha guryaha ay qeexi doonaan qaab-dhismeedkiisa. Tatami-ka Japan ayaa badanaa leh cabirkiisu yahay 90 cm x 190 cm iyo 5 cm oo dhumuc ah, inkasta oo ay sidoo kale jiraan 90 cm x 90 cm. Haddii, tusaale ahaan, afar qof ay seexanayaan qol, cabirradooda waxaa lagu uuraysan doonaa iyadoo la raacayo tirada dermaha tatami, guud ahaan 5.5 dermaha tatami waa tirada dermo ee qolku taageero.
Gogosha tatami waa in aan waligood la dhigin shabakad, ama u dhigmin 3 ama 4 geesood isla bartaas. Sababtaas awgeed, laba nooc oo tatami ah ayaa loo yaqaan: shugijiki, taas oo tatamis ay si toos ah ama si toos ah ugu soo biiraan xitaa iyada oo aan la samaynin gebi ahaanba tirooyin laba jibbaaran; ama fushugijiki, oo gogosha la dhigto midba midka kale isla qolka. Tatami waa cunsur, dhanka kale, kaliya daboolaya kuwa aad seexanaysid, kana tagaya qolalka kale sida jikada ama musqusha mid bilaash ah.
Isticmaalidda dardaaranka tatami ee fasallada sare iyo sayidlayaasha shaaha, ayaa ku soo biiray dagaalka loo yaqaan 'judo or karate', kuwaas oo wali guud ahaan matalaya sariirta. Midabada loo isticmaalo tatamis-ka ee dagaalka noocan ah badanaa buluug ayaa xuduud la leh casaanka mar labaadna buluug, calaamadeynta xadka amniga ee ciyaartoyda iyo daawadayaasha.
Xilligan, taageerooyinkani wali waxay ku sugan yihiin guryaha Jabbaan. Xaqiiqdii, hay'ad kasta oo guryaha dhista waxay guri ku siin doontaa "tatamis" iyadoo ku xiran dadka xiiseynaya.
Sidan oo kale, tatami kaliya uma muuqato bedel ahaan sariirta galbeedka oo leh faa'iidooyin badan, laakiin sidoo kale fikrad dhaqameed oo xukunta hurdada, dhaqanka iyo caadooyinka guryaha qoysaska reer Japan oo kabo cag ku socda dabaqa halka ay ku seexan doonaan qabow xagaaga oo dhan iyada oo aan loo baahnayn taageerayaal.
Ma jeclaan lahayd inaad ku seexato tatami?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Tatami Jabbaan: farshaxanka sagxadda dhulka
Gobollada juqraafiyeed ee Kolombiya